Apple Kutangazve 'Nhasi kuApple' In-munhu Sessions muUS neEurope munaAugust 30 | Ndinobva mac
Apple kuti itangezve 'Nhasi kuApple' mu-munhu zvikamu muUS neEurope munaAugust 30
Imwe yetsika dzakanaka idzo Apple yaive yekutidzidzisa kushandisa akasiyana aripo madhijitari uye zviwanikwa kuburikidza nehurukuro uye makosi akaitwa pasi peNhasi At Apple fomati. Nedenda makirasi aya anoenderera mberi asi mumafomati epamhepo uye yakawanda yekudyidzana yakarasika. Nhau dzakanaka ndedzekuti vanodzoka kubva munhu kubva pakupera kwemwedzi.
Kubva munaAugust 30 Gore rino, zviso zvekutarisana nezviso zvekudzidzisa uye makirasi akaitiswa naApple pasi peNhasi At Apple fomati icharova Apple Store kubva muna Nyamavhuvhu 30. Izvo zvichaita kwete chete muUS asiwo muEurope. Nekuda kwe COVID-19 isu tinofanirwa kufunga kuti kuchave nechengetedzo matanho asi kuyedzwa kuri kuitwa kuti udzokere kune zvakajairika mune ese zviitiko zvekambani, kunyange hazvo mamwe achidhura kupfuura mamwe. Muchokwadi, kambani yakazivisa kudzoka kuti Nyamavhuvhu 30, asi hazviratidzwe kunze kuti inogona kunonoka nekuda kwehutsanana huripo panguva iyoyo.
Mamiriro ezvinhu akavandudzika kuitira kuti mushure megore nehafu, tinokwanisa kutanga kuita zvinhu sezvatakaita pasati pava nedenda rinofadza iri. Chiziviso chemukati chakaperekedzwa ne kuvhura kuchengetedza kweNhasi pazvikamu zveApple kuburikidza newebsite yekambani. Vatengi vava kukwanisa kunyoresa makirasi munzvimbo mavo.
Pari zvino maApple Stores ese akavhurwa uye pane imwe nguva kunyangwe chinosungisa chinosungirwa hachina kudikanwa nekuda kwenhamba dzakanaka uye majekiseni. Nekudaro, zvese zvakachinja uye zvakare zviyero zvakasimbiswa. Saka hatisati tava kukwanisa kukunda kukunda zvakadaro. Gare gare Nyamavhuvhu 30 tichaona kana zvirongwa izvi zvekutarisana zvikaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple kuti itangezve 'Nhasi kuApple' mu-munhu zvikamu muUS neEurope munaAugust 30
iCloud yeWindows yakavandudzwa nechimwe chinhu chitsva chekuchengeteka kwako
WatchOS 6 Beta 8 Ikozvino Inowanikwa kune Vagadziri